के तपाइँ खोज ईन्जिनबाट थकित हुनुहुन्छ तपाइँको साइट लाई क्रल गर्दै? - Semalt को साथ तिनीहरूलाई रोक्नुहोस्!
खोज ईन्जिनहरूले लगभग हरेक दिन तिनीहरूको एल्गोरिदमहरू परिवर्तन गर्दछन् र यी परिवर्तनहरू वेबमास्टर्स र ब्लगरहरूको लागि सधैं राम्रो हुँदैन। त्यहाँ सधैं एक मौका हुन्छ कि तपाईंको वेबसाइट अपडेट गरिएको खोज इञ्जिन नीतिहरूको कारण प्रतिबन्धित हुनेछ। यसको शीर्षमा, उनीहरूको भू-विशिष्ट खोज परिणामहरू र निजीकरण प्रभावित हुने सम्भावना छ। गुगल, बिंग, र याहू खोज नतिजाबाट धेरै वेबसाईटहरू रोक्न यो राम्रो छ कि तपाईंको वेब पृष्ठहरू सजीलो देखिन्छ। जेसन एडलर, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि धन्यबाद, केहि तरिकाहरु खोज परिणामहरु बाट ब्लक गर्न को लागी। ती मध्ये केही तल छलफल गरिएको छ।
तपाईंको गुगल क्रोममा व्यक्तिगत वेबसाइट ब्लकसूचीहरू सिर्जना गर्न ABC को रूपमा सजिलो छ। यसका लागि तपाईंले गुगल एक्स्टेन्सन स्थापना गर्नुपर्नेछ; एकचोटि यो स्थापना भएपछि, तपाईले साइटहरू वा यूआरएलहरू रोक्नको विकल्प देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई प्रायः रिस उठाउँदछ र तपाईंको साइट गुगल खोज परिणाममा पछाडि धकेल्छ। एकचोटि तपाईंले ब्लक विकल्पमा क्लिक गर्नुभयो, ती वेबसाइटहरू तुरून्त गुगल खोजी परिणामहरूबाट हराउनेछ। तपाईंले सम्झनु पर्दछ कि यी साइटहरू याहू र बिंगको खोजी परिणामहरूमा देखा पर्दछ, जसको मतलब तपाईंले यी प्रविधि प्रयोग गरेर अन्य खोजी ईन्जिनहरूबाट उनीहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्न।
२. गुगल खोजी जस्ता खोज इञ्जिनहरूबाट हालको होस्टलाई रोक्नुहोस्:
Webs. वेबसाईट रिपोर्ट प्लगइन:
माथिका दुई विधिहरू बाहेक, वेबसाइटस्पम रिपोर्ट प्लगइन पनि राम्रोसँग राम्रोसँग जानको लागि छ। यसले तपाईंलाई संदिग्ध र वयस्क वेबसाइटहरूलाई स्पामको रूपमा रिपोर्ट गर्न दिन्छ। वास्तवमा, यो सब भन्दा सजिलो र उत्तम विकल्प हो किनकि तपाईं सकेसम्म धेरै वेबसाइटहरू र ब्लगहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि स्प्याम रिपोर्टहरू गुगलमा पठाइयो भने, खोजी ईन्जिनले अन्ततः दण्ड दिन्छ र यसको नतिजाहरूबाट साइट रोकिन्छ।